‘सार्क फिल्म फेस्टिभल २०१९’ मा स्वस्तिमाले जितिन् वेष्ट पफर्मर जुरी अवार्ड !! - Online sakharapur
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/‘सार्क फिल्म फेस्टिभल २०१९’ मा स्वस्तिमाले जितिन् वेष्ट पफर्मर जुरी अवार्ड !!
‘सार्क फिल्म फेस्टिभल २०१९’ मा स्वस्तिमाले जितिन् वेष्ट पफर्मर जुरी अवार्ड !!
काठमाडौँ । नायिका स्वस्तिमा खड्काले चलचित्र बुलबुलबाट करियरमै पहिलो पटक अवार्ड हात पारेकी छिन् । जुलाई २ देखि ७ सम्म श्रीलंकामा भएको ‘सार्क फिल्म फेस्टिभल’ मा स्वस्तिमाले वेष्ट पफर्मर जुरी अवार्ड जितेकी हुन् । फेस्टिभलमा चलचित्र बुलबुलसँगै प्रसाद र हरिले सहभागिता जनाएको थियो । बुलबुलमा स्वस्तिमा सगै मुकुन्द भुषाल ,वुद्धि तामाङ,उज्जल अधिकारी लगायतका थुप्रै कलाकारले अभिनय गरेका थिए । जहाँ स्वस्तिमाले टेम्पो चलाउने महिलाको जीवन्त अभिनय गरेकी थिइन् ।
त्यसैले अवार्ड जितेपछि नायिका स्वस्तिमा खड्काले खुसी हुदै आफ्नो प्रशंसकलाई पनि यस्तो लेख्दै खुसी बाडेकी छिन् । “पहिलो अवार्ड नै अन्तर्रा्ष्ट्रिय पाएँ । एकदमै खुसी छु । यो अवार्डले अझ काम गर्ने प्रेरणा मिलेको छ । ”यसअघि सार्क फिल्म फेस्टिभल २०१४ मा फिल्म झोल बाट अभिनेत्री गरिमा पन्तले उत्कृष्ट अभिनेत्रीको अवार्ड जितेकी थिइन् । त्यसयता कुनै नेपाली फिल्मबाट अभिनेत्रीले अवार्ड जित्न सकेका थिएनन् ।
नेपाल आइडलबाट भाइरल भएकी ‘र्याप गर्ल’ करिस्माको ‘विद्यानास’ सार्वजनिक
निश्चल र स्वस्तिमालाई आदर्श दम्पत्ति सम्मान
‘कबिर सिंह’ बन्यो २ सय करोड कमाउने सहिदको पहिलो फिल्म, पछि पर्यो सलमानको ‘भारत’